Ka caawi ilmahaaga dugsiga | USAHello | USAHello
School waa meesha ay carruurtu wakhtiga ugu qaataan. Waxay bartaan luuqada iyo dhaqanka ee dugsiga. Waxaa muhiim ah in waalidiinta si ay u caawiyaan. Waxaa laga yaabaa inaad si fiican uma aqoon Ingiriis, laakiin waxaa jira siyaabo badan oo aad u caawin karto ilmahaaga. Oo waxaad iyaga ku muujin karaan sida si ay isu caawiyaan! Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fikradaha kaa caawinaya in aad ku caawin ilmahaaga dugsiga.
Waxaa jira arimo dhowr ah oo ay waalidiintu samayn karaan si ay u caawiyaan ilmaha da 'kasta.
Weydii ilmahaaga ku saabsan dareenkooda
ilmaha A dugsiga had iyo jeer ma la hadli doonaa oo ku saabsan sida uu isagu ama iyadu waa dareen. laga yaabo inay ku haysta waqti adag, laakiinse iyagu ma ay doonayaan inay ka welweshaan. Weydii inta badan sida ay dareemayaan. Waxay u badan tahay in aad u sheegto oo ku saabsan dhibaatooyinka ay haddii aad weydiiso yihiin.
Waa ay adag tahay si ay u bilaabaan dugsiga cusub. Booqo dugsiga ilmahaaga ka hor maalinta koowaad ee dugsiga. Markaas ay sidaas ma aha in lagu qaldo doonaa ama laga badiyay maalintii ugu horeysay.
Carruur badan ee USA ciyaari isboortiga ee kooxaha. Qaar kalena waxay ku biiro kooxo ama ciyaaro music dugsiga ka dib. Ogow haddii ilmahaagu uu xiiseynayo in kasta oo waxqabadyada. Sports caawin doonaa iyaga caafimaad oo aad saaxiibo.
Soo iibso ama aan ka helo qalab
Isku day in aad iibsato buugaagta iyo qalabka uu u baahan yahay ilmahaaga ka hor inta uusan dugsigu bilaabmin. Haddii aadan awoodin sahay, la hadal macalinka ilmahaaga. Waxay kuu sheegi doonaan meesha in laga caawiyo sahayda.
dugsiyada American ka welwelaysaane daryeelka carruurta iyo sidoo kale waxbarashada. Sidoo kale, macalimiinta American yihiin kuwo aad si toos ah. Waxay rabaan in ay ka hadlaan wax ku saabsan wixii dhibaato dhaqanka. Waayo ilmaha aadka u yaryar ee dugsiga, waxay la hadli kartaa oo ku saabsan arrimaha la jidhkooda. Tusaale ahaan, macalinka preschool a laga yaabaa in aad u sheegto ilmahaaga waa in calooshu dhibaato ama finan. Haddii taas oo ka dhigaysa in aad raaxo, xusuusnow in macalinku waxa uu isku dayayaa si ay u caawiyaan ilmahaaga. Waxaad taageeri kartaa ilmahaaga iyo macallinka iyagoo ka hadlaya daacad ah oo ku saabsan dhibaatooyinka iyo xalalka helo.
Hel taageero umeerin
Tutoring waxay ardayda ka caawisaa. qof weyn, macallinka, ama arday kale laga yaabaa in ay baraan arday. Your ardayga waxaa laga yaabaa inay baraan ardayda kale, aad. Dugsiyada qaarkood waxay leeyihiin barnaamijyo iskuulka ka dib ama inta lagu jiro fasalo gaar ah ee ardayda si ay u helaan umeerin.
Shakhsiyaadka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa sidoo kale baraan. Tutors waa caadi ahaan diyaar u ah arrimaha ay ugu yeeranayaan kasta. umeerin Private sida caadiga ah dhacdaa ka dib markii dugsiga iyo ku kici doonto lacag. Waxa kale oo laga yaabaa in aad awoodid in aad ka heli caawimaad umeerin lacag la'aan ah ardayga ka barnaamij maxaliga ah ee urur dhow, bulshada diinta, ama barnaamij dugsiga ka dib. Waxaa laga yaabaa in ururada kaliya loogu caawiyo qaxootiga iyo ardayda kale ee ku cusub. xafiiska dugsiga ayaa laga yaabaa in liiska kuwa ilaaliya gaarka ah iyo umeerin lacag la'aan ah dhow. Sidoo kale waxaad ka eegi kartaa FindHello barnaamijyada meesha aad degan tahay.
Daycare iyo barbaarinta
Carruurta bilaabi kartaa xanaanada marka ay ilmaha. xanaanaydyo Qaar ka qaadi doonaa caruurta da'doodu tahay oo kaliya 2 bilood jir. Carruurta inta badan waa 4 ama 5 sano jir marka ay bilaabaan dugsiga barbaarinta. Tani waa marka ay u baahan yihiin caawimaad ugu.
Raadi dharka iyo kabaha ay fududdahay in la geliyeen, oo waxay qaadan off
Macallimiinta dugsiga barbaarinta iyo xannaanada baro carruur badan ay u labistaan ​​oo caawiyaan marka ay aysan heli karin. Marka dhar aad si fudud u qaadan off, aad caawinta ilmaha iyo macallinka.
Samee jadwal la mid ah sida dugsiga
Haddii ilmahaagu hurdo gaaban ah ama uu leeyahay waqti aamusan dugsiga, isla guriga ku samayn. Waxaa ka dhigi doonaa sahlaysaa inay raacaan caadiga ah dugsiga.
Reading waa caado wanaagsan in la bilaabo marka caruurtadu aad u da 'yar. Reading caawisaa ilmahaaga si wanaagsan baad yeeli dugsiga. Isku day in aad ilmahaaga u akhri dhawr jeer toddobaadkii iyo wakhtiga hurdada. Haddii aadan si fiican u aqoon Ingiriis, ka heli buugaagta sawirrada iyo ilmahaaga waydii inuu kuu sheego waxa ka dhacaya sawirada. Waxa kale oo aad bilaabi kartaa in ay wax isla bartaan, warqado Ingiriisi.
Ilmahaagu bilaabi doonaa fasalka 1 da 6. dugsiga hoose iyo dhexe waxaa ka mid ah fasalada 1 in 8.
Calan joogtada ah homework a
Carruurta USA heli nooc ka mid ah shaqada guriga maalin kasta. Waa in aad ku dhiirigeli inay sameeyaan ugu yaraan waxoogaa yar habeen walba. Haddii aad fahmi weydo waxa ay ka shaqeeya, weydii in ay kuu sheegi ah oo ku saabsan. Isku day inaad si ay u caawiyaan marka aad awoodid.
Hubi in macalinka
Hubi inay ka qayb galaan shirarka waalidka iyo macalimiinta si ay u bartaan sida ilmahaagu ku yahay. Haddii aad u baahan tahay turjumaan, u sheeg ilmahaaga inaad macallimiinta weydiisaan ka hor wakhtiga. Ha ka baqin inaad la hadasho macalinka ku saabsan wax kasta oo laga yaabo in aad ka wel ku saabsan.
Ka dhig reading!
Read buugaagta carruurtaada maalin kasta ilaa ay akhristayaasha ugu hadla. Haddii aadan aqoon Ingiriisi, waxaad weydiisan kartaa ilmaha in ay kuu aqriyaan in English iyo turjumi. Caruur badan ayaa dooni doonaa inuu u ciyaaro kulan video, watch TV, ama noqon on warbaahinta bulshada da'daan. Hubi inay xad waqti oo aan u muujiyo in reading waa muhiim.
Carruurtu waxay badanaa bilaabaan dugsiga sare markay tahay 14 ama 15. dugsiga sare keenaya caqabado kala duwan.
Sii wad in aad la hadasho ilmahaaga dugsiga maalin kasta
Da'daan, ilmahaaga aan idiin sheego sida ugu badan ee ay isticmaalaa in lagu. Ku dhiiri geli in ay ka hadlaan waxa ay baranayaan iyo sida ay dareemayaan.
Haddii ilmahaagu sameeyo ciyaaraha ama howlaha, oo iyaga si haddii aad awoodid. Waalidiinta ee Maraykanka u taageeraan carruurta by muujinaya kor. Tani waxay sidoo kale kaa caawin karaan inaad la kulanto dad badan ee bulshada.
La hadal ah oo ku saabsan tallaabooyinka xiga
dugsiga sare waa marka ardayda oo dalka Mareykanka ah bilaabin qorsheynta kulliyadda. Ku dhiiri geli carruurtaada in qorshahooda. Kaalmo ka heli karto dugsiga la xirfadiisa iyo qorshaynta kuliyadeed.
A wadahadalo cusub hore ee ku saabsan caqabadaha ay wajahday markii bilaabin dugsiga sida ilmo. Waxay bixisaa talooyin ku saabsan sida si ay u caawiyaan ilmahaaga.
Ogeysiis gaar ah hooyooyinka hal
Waalidnimada dhallinyarada waa adag! had iyo jeer ma laga yaabaa in aad ogaato waxa la sameeyo marka caruurteena ku koraan iyo isbedelka. Tani waxay noqon kartaa ugu adkaa ee hooyooyinka hal wiilal da ' 17 iyo ka weyn. Haddii ardaygaaga laga guul darreysatay in dugsiga sare, uu ka boodi kartaa fasalada ama ka tago dugsiga wadajir.
Iska ilaali calaamadaha digniinta. Haddii ilmahaagu u muuqataa niyadjab ama joojiyo hadalka ku saabsan dugsiga, wuxuu laga yaabaa in lagu guul darreystay. Sii wad in aad su'aalo weydiiso si taxadar leh oo u dulqaadanaya in isaga dhiirrigeli inay kula hadlaan. Ka dheerow la xiriiro macallimiinta isaga ama iyada iyo dugsiga, si aad u ogaato waxa dhacaya. Waa qayb ka mid ah shaqada si ay u caawiyaan dhibaatooyinka.
Haddii aad run ahaantii ka walwalsan, caawimaad weydiiso. Ka bilow ah Khadka Waalid Qaranka. Waxay leedahay dad u tababaran kuwaas oo ku siin kara taageero iyo talo by phone at (855) 427-2736, Isniinta ilaa Jimcaha, 10 am PST in 7 pm PST. Waxa kale oo ay leedahay khayraad badan oo online.
Sidee ayaan u tagtid jaamacadda?